ရုပ်မြင်သံကြားသတင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ရုပ်မြင်သံကြားသတင်း
Posted by Phaung Phaung on Jan 31, 2012 in Creative Writing, Think Different | 16 comments
ည 8 နာရီသတင်းအစီအစဉ်တွေလာရင် တခါတရံ သေသေချာချာလေးကြည့်ဖြစ်ပါတယ်.. ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကာ.. လူကြီးက သက်ဆိုင်ရာဒေသ၊ဌာန၊စီမံကိန်းများကို လိုက်လံကြည့်ရှုစစ်ဆေးတဲ့သတင်းပါ။ ဟိုးဘုရင်လက်ထက်တုန်းကတော့ တိုင်းခန်းလှည့်လည်တယ်ပေါ့…
လူကြီးလာစစ်တော့မယ်ဟေ့ဆိုရင် မြင်ကောင်း၊ရှု့ကောင်းအောင်လုပ်ကြ ( ခဏတာ) .. သဲဖြူခင်း၊ရာဇမတ်ကာ … ဆိုတဲ့စကားပုံလိုပေါ့ .. လူကြီးနောက်ကနေ လူတွေအများကြီးလိုက်.. ကြည့်ရှုခံရတဲ့ ဌာနကလဲ သေသေချာချာပြင်ပြီးကြိုဆို။ အဲဒီလိုပုံစံအတိုင်းသွားနေတာ တော်တော်ကြာပေါ့… လိုအပ်သည်များမှာစားသွားပါတယ် (အဲလေ မှားလို့) လိုအပ်သည်များ မှာကြားသွားပါသည်နဲ့ နိဂုံးချုပ်။ လူကြီးပြန်လို့မှ နောက်ကျောရှိသေးတိုင်း ဒုံရင်းကဒုံရင်း ။
အခုလိုလွတ်လပ်ပွင့်လွင်းမှုရှိလာတဲ့အချိန်မှာ ဖြစ်စေချင်တာကတော့ အဲဒီလိုတွေစီမံပြီးလိုက်မကြည့်ပဲနဲ့ … လာစစ်မှန်းတောင်မသိလိုက်အောင် လူကြီးရဲ့အတွင်းရေးမှူးဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်ဦးဦးကိုကြည့်ခိုင်းပြီး အရှိကိုအရှိအတိုင်းတင်ပြမယ်၊ တွေ့နေရတဲ့အနေအထားကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်မယ်၊ စည်းကမ်းသတ်မှတ်မယ် … ဒီလိုတွေလုပ်မယ်ဆိုရင် ပိုပြီးတိုးတက်မယ်လို့မြင်မိပါတယ်။ ဥပမာ.. လာဘ်စားပါတယ်လို့နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဌာနဆိုင်ရာတွေ၊ ရုံးတွေကို Customer အနေနဲ့ဝင်ထွက်လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် လက်တွေ့သိသွားမှာပါ.. အဲဒီက ၀န်ထမ်းတွေ ဘယ်လိုပျက်စီးနေသလဲ၊ လာဘ်မရရင် မလုပ်ချင်တာတွေ၊
1000 ပေးတာတောင် နောက်တခေါက် Case ပြန်တက်လာရင် ထပ်ပြီးလိုက်ရမယ်နော် 1000 ထဲနဲ့တော့ မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးလို့ ပေါ်တင်တောင်းတာတွေ …(စိတ်ဓါတ်တွေတအားပျက်စီးနေတာတွေ) ရလေလိုလေ အိုတစ်စေဖြစ်နေကြတာကို ထဲထဲဝင်ဝင် ၀င်ရောက်လေ့လာပြီး ပြင်သင့်တာပြင်လို့ရအောင် လုပ်သင့်နေပြီလို့ထင်မိပါတယ်… ဟိုးဘုရင်လက်ထက်တုန်းကတောင် ရုပ်ဖျက်ပြီး တိုင်းပြည်ရဲ့ပကတိအခြေအနေကို လေ့လာခဲ့တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်…ဘာကြောင့် ဒီလိုလုပ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိကြတာလဲ
တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်တွေ မသိဘဲတော့မနေပါဘူး .. မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတာလား၊ ဒီလိုဆိုရင်တော့ တိုင်းပြည်ကတိုးတက်ဖို့ဝေးနေဦးမှာပဲ ( လာဘ်လာဘကြောင့်ပျက်စီးနေတဲ့စိတ်ဓါတ်တွေအရိုးစွဲနေကြသရွေ့)
ဌာနကလူကြီးတစ်ဦးကပြောဘူးတယ်……. ကြွေကျတဲ့အသီးကိုပဲစားပါ၊ မကျကျအောင် အပင်ကိုလှုပ်ခါပြီးမစားပါနဲ့တဲ့ (မပေးရင် ပညာပြလိုက်မယ်) ဆိုတာမျိုးမလုပ်ကြဖို့ပေါ့………. ဒါပေမယ့်လဲ သူတပည့်တွေက လောဘသမားတွေများသား…..
တို့လိုပဲ ရုံးပြင်ကနားသွားလာနေရတဲ့သူတွေ သိမှာပါနော် ( ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်လာဘ်ပေးမှဆိုတာလေ
ဟိုးဘုရင်လက်ထက်တုန်းကတောင် ရုပ်ဖျက်ပြီး တိုင်းပြည်ရဲ့ပကတိအခြေအနေကို လေ့လာခဲ့တယ်ဆိုတာ
သူတို့ခေတ်က TV မရှိသေးတော့ တော်ရုံတန်ရုံလူတွေက ဘုရင်မှန်းဘယ်သိမလဲ
အခုခေတ်ကြတော့ သူတို့ရုပ်တွေကို ကလေးက အစသိနေ၊ လာဘ်စားတာတွေများတော့ တိုင်းခန်းလှည့်လည်ရင် ရိုက်ခံရမှာ စိုးလို့ပေါ့။
အဆိုတော်ရသရဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ် ထပ်ခါ ဆိုလိုက်မယ်
..♪..♫… နေရာတိုင်းမှာ လမ်းကြောင်းရှိတယ် … လမ်းကြောင်းရှိတယ်…♪..♫…
အကျင့်ဆိုး ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးက အခုချိန်ထိ မီးမှောင်းထိုးပြနေတော့ … ……………
ကိုရင် စည်သူ (အဲလိုပဲခေါ်လိုက်တော့မယ်နော်)
အကျင့်ဆိုး သီချင်းရှိရင် ပေးပါလားဗျာ
ကျွန်တော် အဆုံးထိ နားမထောင်ဖူးလို့ပါ
၃၃ လမ်းက ဂရိတ် တေးသံသွင်းမှာ ရှိတယ်လို့တော့ ပြောတာပဲ
ကျွန်တော်က နယ်က ဖြစ်နေလို့ပါ…
အရင်းစစ်ရင် ဘယ်ကို အပြစ်တင်မလဲ
ကိုယ့် ကို ကိုယ်ပဲ အပြစ်တင်ရမယ် . .
မြင်မိ ကြားမိတာကြောင့် . .
တောင်းလို့ ပေးကမ်းမိတာကြောင့် . .
( မပေး ရင်လဲ ငုတ်တုတ်မေ့ )
ဒီဘဝ မှာ လူဘဝ လာဖြစ်မိတာတွေ ကြောင့်ပေါ့ဗျာ . .
“ လိုအပ်သည်များကို လှည့်လည်ကြည့်ရှူ စစ်ဆေး ” တဲ့ ၊ အဲဒီစကား ကို ကျွန်တော် နားမလည်ဆုံးဘဲ ။ ကျွန်တော် တို့ မြန်မာစကားမှာ “ဖိုးသူတော်စာ ဖိုးသူတော်ဘဲ ဖတ်တတ်” ဆိုတာ ရှိတယ်မို့ လား ။
လူကြီးတွေက မသိတာ မဟုတ်ပါဘူး မသိချင်ယောင်ဆောင်တာပါ..(သူလဲခွဲတမ်း ယူထားလို့လေ)
လာစစ်တော့ အထာကြီးနဲ့ပေါ့၊ ပြီးတော့ လိုအပ်တာများ(ပိုက်ဆံ)မှာကြားသွားပါတယ် တဲ့၊
အလွန်ကောင်းတဲ့ ပို့စ်ပါပဲ ဖြစ်နေတာနဲ့ …။ ဖြစ်သင့်တာလေး နှိုင်းယှဉ်ပြောပြပြီး လက်တွေ့ဘ၀ကျကျ အခြေနေတွေပြောပြသွားတာ တိကျထိရှလှပါတယ် … ။
လူကြီးတွေ လာခါနီးမှ ပြင်ဆင်ထားပြီး အပေါ်ယံလောက်သာ ကြည့်ပြီး တကယ့်အခြေနေ ဟုတ်မှန်း မသိ မဟုတ်မှန်းမသိ ညွှန်ကြားသွားတာရယ် ၊ ညွှန်ကြားချက်ကို ပြန်လည် ဆွေးနွေးမှုမရှိပဲ မှားမှား မှန်မှန် လက်ခံတာရယ်က တိုးတက်မှုကို ပိတ်ပင်တဲ့ လမ်းကြောင်းလို့ ထင်မိပါတယ် … ။
အခြေနေမှန်ကို တကယ်သိချင်လျှင် တကယ် ရှောင်တခွင် စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်ရပါမယ် … ။ ဒါမှသာ တကယ့် လက်တွေ့ အခြေနေစစ်ကို မြင်နိုင် ၊ ညွှန်ကြားနိုင်ပါလိမ့်မယ် … ။
case ပြန်တက်လာရင် ဆိုတဲ့အရေးအသားကြောင့်စာရေးသူက Custom မှာ case တင်နေရတဲ့သူလား
value တင်နေတဲ့သူလား ကုမ္ပဏီက၀န်ထမ်းလားလို့ထင်မိတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်ထဲက အခက်အခဲလေးတွေ
“ဌာနကလူကြီးတစ်ဦးကပြောဘူးတယ်……. ကြွေကျတဲ့အသီးကိုပဲစားပါ၊ မကျကျအောင် အပင်ကိုလှုပ်ခါပြီးမစားပါနဲ့တဲ့ (မပေးရင် ပညာပြလိုက်မယ်) ဆိုတာမျိုးမလုပ်ကြဖို့ပေါ့”
အခုတော့ အပင်ရင်းကနေတောင် ခုတ်လှဲနေကြတာဗျ။
ဟိုတုန်းကဘုရင်တွေက ဖြောင့်မတ်ပြီး၊ ဘက်လိုက်မှု့မရှိလို့သိရတယ်။
အဲဒီတော့ ရုပ်ဖျက်ပြီးလိုက်စုံစမ်းလို့ အပြစ်ရှိသူကိုအပြစ်ပေးရဲတာပေါ့။
အခုက ကိစ္စတစ်ခုကိုအရေးယူဘို့ စုံစမ်းလိုက်ရင်ပက်သက်တဲ့သူစာရင်းမှာ မလွတ်မကင်းတွေနဲ့
ကြုံရတာများတော့ မစုံစမ်းရဲဘူးဖြစ်နေတာလေ။ဒါနဲ့ဘဲ ဒို့တိုင်းပြည်လည်း လိမ်တလိမ်လိမ် မုန့်ကြိုးလိမ်
လူကြီးလာစစ်တော့မယ်ဟေ့ဆိုရင် မြင်ကောင်း၊ရှု့ကောင်းအောင်လုပ်ကြ ( ခဏတာ) ..
သဲဖြူခင်း၊ရာဇမတ်ကာ … ဆိုတဲ့စကားပုံလိုပေါ့ .. လူကြီးနောက်ကနေ လူတွေအများကြီးလိုက်..
ကြည့်ရှုခံရတဲ့ ဌာနကလဲ သေသေချာချာပြင်ပြီးကြိုဆို။ အဲဒီလိုပုံစံအတိုင်းသွားနေတာ
တော်တော်ကြာပေါ့… လိုအပ်သည်များမှာစားသွားပါတယ် (အဲလေ မှားလို့) လိုအပ်သည်များ
မှာကြားသွားပါသည်နဲ့ နိဂုံးချုပ်။ လူကြီးပြန်လို့မှ နောက်ကျောရှိသေးတိုင်း ဒုံရင်းကဒုံရင်း ။
အဲဒါတွေကလဲ တနိုင်ငံလုံးမှာ ဖြစ်နေတာ။အဓိက ဥပဒေမခိုင်မာလို့ ပါ။ဥပဒေသာ တည်တံ့ရင်
ဘယ်သူ မှခုလိုလုပ်ရဲ မှာမဟုတ်ဘူး
ဟုတ်ကဲ့… လက်ရှိတော့ကုမဏီဝန်ထမ်းပါ ။ Custom ပိုင်းကိုတော့ မသွားရပါဘူး…ဆက်နွယ်တဲ့နေရာတွေပေါ့ …. မိတ်ဆွေတွေနဲ့စုပြီးထောင်ထားတဲ့ ကုမဏီသေးသေးလေးကတော့ ခုမှစတုန်းပါ။ လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ နိုင်ငံခြားကနေ ပစည်းသွင်းချင်ရင် ပို့ချင်ရင် ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ Service လုပ်ပေးပါတယ်။ ( ဟီးးး ကြော်ငြာတာ မာကတ်တင်းဆင်းတာ )
သူကြီး ကြော်ငြာ လက်ခံတော့မယ်တဲ့.. နေရာ မရမှာ စိုးရတယ်နော် … ခုဘဲ သူကြီးနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး နေရာ ဘွတ်ကင်လုပ်ထားလိုက်လေ.. :grin:
တို့လူမျိုးအများစုကလည်း လူကြီးလာမှ အလုပ် လုပ်ယောင်ဆောင်တတ်ကြတာ(အလုပ် မလုပ်ပါ) အများသားကလား.. မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့နော်.. မယုံမရှိကြနဲ့..